ni mo hlaing
Posted by :) at 18:43 No comments:
nimo's talk with dvb
သတင်းကတော့ အဟောင်းပဲ။ သို့ပေမယ့် နီမိုလှိုင်ရဲ့ အင်တာဗျူး ပါနေတဲ့အတွက် မှတ်တမ်းတင်တဲ့သဘော ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Protests over gas prices spread
Aug 21, 2007 (DVB)—Hundreds of protestors marched through Rangoon and clashed with government supporters today inaseries of separate demonstrations against the military’s decision to raise gas prices last week.
Members of the National League for Democracy and the 88 Generation Students group, who marched from Tamwe township’s Shwe Baho clinic to the NLD headquarters on Shwegondine road, were threatened by men armed with slingshots and sticks.
A woman who joined the protest march told DVB that the men followed the demonstrators, shouting abuse and ordering them to take public transport.
“A pack of thugs followed us all the way to the Six Storey pagoda and harassed us. They threatened to beat us up. They also tried to force us to take buses,” the woman said on condition of anonymity.
The chairman of the NLD’s Yankin branch, U Myo Khin, and six other NLD members said that when they arrived in Tamwe to join the start of the protest march, they were physically forced ontoabus byagroup of about 50 men.
“We arrived in front of the Tamwe plaza and saw about 40 to 50 people sitting there. When we passed them they got up and grabbed weapons they had hidden inanearby truck. It was quiteascene in front of the bystanders,” U Myo Khin said, adding that after the activists were forced onto the bus they got off at the next stop and started walking.
Another group of NLD members were also harassed outside Tamwe plaza inaseparate incident. Ma Nemo Hlaing, an NLD youth member, said as she approached the building with four colleagues,agroup of about 90 men threatened to kill her if she joined the protests.
“They threatened to beat us to death on the spot if we continued to walk and told us to get intoacar. We refused and told them they could do anything they wanted to us but we would keep walking . . . eventually they let us go,” Ma Nemo Hlaing said.
Students were also seen handing out leaflets outside the Western and Eastern Rangoon universities and the Hlaing Tharyar bus station today, encouraging people to join protests against the gas prices over the next week.
A bus passenger who was givenaleaflet said that he was determined to join protests led by the students in Rangoon tomorrow.
“On the leaflet is said that the activists were demanding lower commodity prices . . . We welcome this as we have been waiting for that day for so long. We will join them,” the man told DVB.
A group of shoe factory workers from Hlaing Tharyar also releasedastatement today saying that they would join public protestors tomorrow if the government failed to lower the gas prices and refused to respond to their demands for better working conditions.
The NLD said yesterday that if the government continued to refuse to address the deepening economic crisis in Burma it could expect widespread unrest.
“[The increased gas prices] have caused the prices of all commodities to rise . . . and this has forced the people intoagreater state of poverty. It is the government’s responsibility if public unrest spreads,” the NLD said.
Posted by :) at 07:43 No comments:
Posted by :) at 19:15 No comments:
အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသူ အမျိုးသမီးတွေက ကုလသမဂ္ဂ
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ ကမ္ဘာ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေထံ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကြေညာချက်မှာ မနီလာသိန်း၊ မတင်မိုးလွင်၊ မဖြူဖြူသင်း၊ မနီမိုလှိုင်၊ မမေသစ္စာတို့က လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၇ နေ့စွဲနဲ့ပါ။ ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မနီမိုလှိုင်က ဒီဗွီဘီသတင်းဌာနကိုပြောကြားထားတဲ့ထဲက ကောက်နှုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
“… … ဘယ်သူမဆို နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောင်ထဲကို ရောက်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာက အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးကို စပြီး အချိုးဖောက်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ တခါ ထပ်ပြီးတော့ သူတို့ စိတ်ကြိုက် ပြစ်မှုတွေ၊ ပုဒ်မတွေတပ်ပြီးတော့ ထောင်ဒဏ်ချပြီးတာတောင်မှပဲ လွတ်ရက်စေ့တဲ့အခါမှာ လွှတ်မပေးသေးဘဲနဲ့၊ ဆက်ပြီးတော့ အကြောင်းအမျိုးနဲ့ ချုပ်နှောင်ထားတာတွေ၊ အဲဒီတော့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဆိုလို့ရှိရင် နဂိုကတည်းက ထောင်ရဲ့ သဘောတရားအရ ဖိစီးမှုရှိတယ်၊ ထောင်ထဲမှာ နှစ်ရှည်လများ နေထိုင်ရတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ရတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ထောင်ထဲမှာ မဟုတ်ရင်တောင်မှပဲ ထောင်ရဲ့ ပြင်ပမှာ စီးပွားရေးအရ၊ လူမှုရေးအရ ချိုးနှိမ်ခံထားရတာတွေ ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တခါ အာဏာာပိုင်က ကမ္ဘာကို လှည့်ပတ်ပြီးတော့ လိမ်ညာဖို့ ဂုဏ်သိက္ခာဆည်ဖို့ ထောင်ထဲထည့်ပြီး အသုံးချခံလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေကိုလည်း ဒီအတိုင်း ပြန်မလွှတ်ပေးလိုက်ပဲနဲ့ လမ်းမှာ နှုတ်ပိတ်လိုက်သလား၊ စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံနေရတဲ့ ဟာလေးတွေလဲ ရှိတယ်။
တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ အနေနဲ့ကတော့ တိမ်းရှောင်နေဆဲမှာကိုပဲ ဆက်လက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးကို လုပ်ဆောင်နေကြသူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖမ်းမိတဲ့အခါကျရင် ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ နအဖ အစိုးရက ဒီလို ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ အပြစ်ဒဏ်မျိုးတွေကို ကြုံမယ်မှန်းမသိ၊ နောက် ဒီအမျိုးသမီးတွေကလည်း ကြာရှည် ဘယ်လောက်အထိ ပုန်းအောင်းနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိတဲ့အခါ ကျတော့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ ထောင်ထဲမှာသော်လည်းကောင်း၊ အဖမ်းမခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာရောပဲ အင်မတန် စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။… …”
“… … ကျနော်တို့ ဘယ်လိုပဲ ခံစားနေရပါစေ၊ နောက်နောင် ကျနော်တို့လို အခြားအခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ထပ်မခံစားရအောင်ကတော့ ဒီနိုင်ငံနဲ့ အစိုးရနဲ့ ဒီ နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံ နည်းစနစ်ကြီး ပြောင်းသွားမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ … …”
ဒီဗွီဘီ ၊ ၂၃ ၊ သြဂုတ်
“… … ကျနော်တို့ အယောက် (၅၀) ကျော်က ရွှေဂုံတိုင် မီးပွိုင့်ထိပ်မှာ အတားခံရတယ်ဗျာ။ အတားခံရပြီးတော့ အတင်းဆွဲလွဲပြီး တင်တာတွေ ခံရတယ်ဗျာ။ အဲတော့ တယောက်နှစ်ယောက် ပထမ အဆွဲခံရပြီးတော့ အကြမ်းပတမ်းအဆွဲခံရပြီး ပါသွားတော့ တော်တော်လေး အခြေအတင် အကြမ်းပတမ်းဆွဲတယ်။ နောက်ဆုံး အယောက် (၅၀) လုံး လက်တွဲပြီးတော့ ရွှေဂုံတိုင်ထိပ် ရေတာရှည်လမ်းမ တည့်တည့်မှာပဲ ကျနော်တို့ အဲဒီအပေါ်မှာ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ စုထိုင်ပစ်လိုက်တယ်။ စုထိုင်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ သူတို့ ကျနော်တို့ အတင်း ကားပေါ်တက်ခိုင်းတယ်။ ဆယ်နာရီလောက်ရှိပြီ။ ဆယ်နာရီလောက်ကနေ အခုချိန်အထိပေါ့။ ကျနော်တို့ အဲဒီအ၀မှာစုထိုင်နေပြီးတော့ နောက်ဆုံး တယောက်ချင်း အတင်း ယောက်ျား လေးငါး ဆယ်ယောက်က ယောက်ျားတယောက်စီကို မ်ိန်းမတယောက်စီကို အတင်းဝင်ဆွဲပြီးတော့ ကားပေါ်တယောက်ချင်း တင်သွားလိုက်တာ တစတစနဲ့ အယောက်နှစ်ဆယ်လောက် ပါသွားတယ်ခင်ဗျ။
နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ အယောက်သုံးဆယ် အားလုံး စုထိုင်နေပြီးတော့၊ ဘာမှမရှိတော့ဘူး၊ ကျနော်တို့ ရိုက်ရင်လဲ ဒီနားမှာပဲခံမယ်။ သတ်ရင်လဲ ဒီနားမှာပဲ အသေခံမယ်။ ခင်ဗျားတို့ ပြောသလို ကျနော်တို့ မလုပ်တော့ဘူး။ ကျနော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ရုံးကိုပဲ ဆက်သွားမယ်။ ဆက်သွားခွင့်မရရင် ကျနော်တို့ ဒီိနားမှာပဲ ထိုင်နေမယ်လို့ အားလုံးလက်တွဲပြီး ခေါင်းငုံ့ပြီး ထိုင်နေကြတော့ နောက်ဆုံး ကျနော်တို့ကို ဆဲတယ်၊ မခံချင်အောင်ပြောတယ်။ နောက်ဆုံး ယောက်ျားလေးတွေကို ဘေးနားအစွန်နားက ထိုင်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကို ပုဆိုးကနေ စလှန်ပြီးဆွဲတယ်။ ပြီးတော့ လူလေးငါးယောက်က ဆယ်ယောက်လောက်က ယောက်ျားတယောက်စီကို ၀ိုင်းဆွဲတယ်။ ကျနော်တို့ မ်ိန်းမအုပ်စုကို ချက်ချင်းမဆွဲရဲပေမဲ့ နောက်ဆုံး အတွဲလိုက်ကြီး ကျနော်တို့ ပက်လက်တွေရော၊ ဒရွတ်တိုက်တွေရော၊ အတွဲလိုက်ကြီး ဆွဲပြီး၊ နောက်ဆုံး လိုင်းကားတစီးပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုင်းကားပေါ်မှာ နောက်ဆုံးအုပ်စု အယောက်သုံးဆယ်လောက်ပေါ့နော်၊ ပါပြီးတော့ အဖွဲချုပ်ရုံးမှာ အခုပဲ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးကို ကျနော်တို့ရောက်ပါတယ်။ … …”
ဒီဗွီဘီ ၊ ၂၁ ၊ သြဂုတ် ၊ ၂၀၀ရ
“… … လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စက ဆက်လုပ်ရအုံးမှာပဲလေ။ အာဏာပိုင်က ပိတ်ချင်လည်း ပိတ်ပေါ့။ ဒါ ကျနော်တို့ လျှို့ ဝှက်ပြီး လုပ်တဲ့ကိစ္စလည်း မဟုတ်ဘူး။ တကယ်လို့များ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဘာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း ကျနော့်အထင် ကျနော်တို့ ၀င်ပါရအုံးမှာပဲ။ ဆန္ဒပြပွဲဆိုတာမျိုးကတော့ ကျနော်တို့ ထင်တယ်လေ၊ လူထုက ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို တိုက်ပေးတဲ့သူတွေရှိလို့ ရေသာခိုပြီးနေလို့မရသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်လုပ်ယူရမှာပဲ။ … …”
Ni Mo Hlaing’s words
“I don’t even remember how many times I was beaten. The only thing I heard was ‘Hit that bitch! Hit that bitch!’ from the plainclothes security officials. My clothes were torn, my watch broken, my umbrella and sandals were lost there.”
One angry bystander shouted at the government mob to stop abusing us once he saw the assault on us. The thugs rushed to him and hit him repeatedly. Then he was shoved into the car.”
Posted by :) at 05:40 No comments:
၁၉၈၉ခုနှစ် အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဧရာဝတီတိုင်းခရီးစဉ် မြင်ကွင်း။ အသံချဲ့စက်တပ်ထားသော ကားတစ်စီး၊ သေနတ်ကိုင်စစ်သား၊ ဒေါ်စုအနားသို့ကပ်ခွင့်မရသော ကမ်းလုံးညွတ်လူထု။
1989-1995 အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၅ခုနှစ်မှာ ပြန်လွတ်လာတဲ့ ဒေါ်စုက သူ့အိမ်ရှေ့ကိုလာရောက်နှုတ်ဆက်သူများကို နှုတ်ဆက်စကားပြောရင်း ဟောပြောပွဲတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ ဦးတင်ဦး၊ (ဦးကြည်မောင်) တို့လည်း ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လည်း တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၉၈ ရဲမွန်တပ်မြို့ရောက် အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ပါတယ်။ အထိန်းသိမ်းခံရတယ်လို့ သတင်းဌာနများက ဆိုပါတယ်။ စစ်အစိုးရကတော့ ဆွေးနွေးဖို့ ခေါ်ယူထားသူများလို့ သုံးနှုံးပါတယ်။
အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ။ အမျိုးသမီးတွေ နိုင်ငံရေးမှာ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ဖို့ ဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဖန်တီးခဲ့တာလို့ ယူဆရပါတယ်။ အာရုံစိုက်စရာတွေများလွန်းလို့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မကြားခဲ့ရဖူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီပုံကို ၁၉၉၈ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးထားတာပါ။ တပတ်ကိုတကြိမ် ဒေါ်စုနဲ့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ စကားဝိုင်းကို ဌာနချုပ်ရုံးမှာ တွေ့ရပါတယ်။
၁၉၉၅-၉၆ ဒေါ်စုအိမ်ရှေ့ဟောပြောပွဲကို လာရောက်သူတွေနဲ့ ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်အောင် လုံခြုံရေး ယူပေးတဲ့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေ။
၁၂-၂-၁၉၉၆ ဒေါ်စုအိမ်ထဲက မြင်ကွင်း။ အဲဒီကာလ စုစည်းမှုတွေကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ဖို့ ဖြစ်လာပုံရတယ်။
၁၉၉၈ မှာ အဖွဲ့ချုပ်က တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ စီအာပီပီ ကို တည်ထောင်လိုက်တယ်။ နိုင်ငံရေးအရှိန်အဟုန် မြှင့်တက်လာတယ်။ အာဏာပိုင်တို့ဘက်က နှိပ်ကွပ်မှုလည်း ပိုပြီး မြှင့်တက်လာတယ်။
အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဦးညွန့်ဝေရဲ့ အိမ်။ တခါတလေ အာဏာပိုင်တွေက အဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ်ရုံးကို သိမ်းထားတဲ့အခါ ဦးညွန့်ဝေရဲ့အိမ်ဟာ ယာယီဌာနချုပ်ရုံးဖြစ်တတ်တယ်။ ဦးညွန့်ဝေကိုပါ အကျယ်ချုပ်ချထားရင်တော့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေက ရုံးတွေ ဖြစ်သွားတယ်။
ဒေါ်စုက ရန်ကုန်တိုင်း ဒလမြို့နယ်ကို ၁၉၉၅ နောက်ပိုင်းမှာ ၂ ကြိမ် သွားခဲ့တယ်။ သြဂုတ် ၂၄၊ ၂၀၀၀ နဲ့ ၃၀-၈-၂၀၀၂ ရက်နေ့တွေမှာ။ ပထမအကြိမ်မှာတော့ အတားဆီးခံခဲ့ရတယ်။ မြန်မာပြည်အနှံ့ခရီးစဉ်တွေမှာ အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတယ်။ အောက်ပုံကတော့ မန္တလေးတိုင်း၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ရင် အဲဒီကာလ အခြေအနေကို သိနိုင်မှာပါ။
ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဒေါ်စုရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြနေပုံ။ ၃ လအကြာမှာ ဒေါ်စု ဆေးရုံကို ရောက်လာပါတယ်။
ဒေါ်စု ကျန်းမာစေဖို့ ဆေးရုံရှေ့မှာ သွားရောက် ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ။ အဲဒီအချိန်မှာ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး ထောင်ထဲရောက် တချို့လည်း သူတို့အိမ်တွေမှာ အကျယ်ချုပ်ကျ။ တနိုင်ငံလုံးက အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှန်သမျှ အပိတ်ခံရပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ်ရုံးဝင်းတံခါးသော့ ဖွင့်နေတဲ့ ဦးစိုးဝင်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) (AP photo)။ အဲဒီနေ့ (၁၆-၄-၂၀၀၄) မနက်ပိုင်းက ကိုမောင်မောင်သန်းအိမ်ကို ထောက်လှမ်းရေးက သော့သွားပေးတယ်။ ဒါနဲ့ ၁ နှစ်ကြာ ပိတ်ထားရတဲ့ ဌာနချုပ်ရုံးကို အဲဒီနေ့မှာ ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ အကျယ်ချုပ်ကျနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေထဲက ၂ယောက် ပြန်လွတ်တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ရဲ့ အမျိုးသားညီလာခံလည်း ပြန်အသက်ဝင်တော့မယ့် အချိန်ဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့ချုပ်က ညီလာခံပြန်တက်မယ် ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်အားလုံးလည်း ပြန်လွတ်နိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာက ယူဆထားကြတဲ့အချိန်လည်း ဖြစ်တယ်။ ရုံးချုပ်ပြန်ဖွင့်တဲ့နေ့မှာပဲ အဖွဲ့ချုပ်က ကြေညာချက်တစောင် ထွက်လာတယ်၊ ညီလာခံမှာ အရင်စည်းကမ်းချက်တွေအတိုင်းဖြစ်နေရင် ပြန်တက်မည်မဟုတ် တဲ့။ ညီလာခံစည်းကမ်းချက်တွေကို အတူတကွ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြမယ်လို့လည်း ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်၊ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်တယ်ဆိုတာကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ဇူလိုင် ၁၉ ၂၀၀၆ အာဇာနည်နေ့မြင်ကွင်း။ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တွေ အာဇာနည်ကုန်းသွားပြီး အလေးပြုတဲ့အခါ အခုလို တားဆီးခံရတယ်။
ဒါနဲ့ လမ်းပေါ်မှာပဲ အလေးပြုခဲ့ရ။ (reuters ဓာတ်ပုံ)
၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လည်း ပူးပေါင်းမှုတွေ အခုလို ရှိနေပါတယ်။
အကျယ်ချုပ်ကျနေတဲ့ ဒေါ်စုကို သွားတွေ့ဖို့ အဖွဲ့ဝင်တွေ အခုလို လမ်းမှာ အတားဆီးခံရတယ်။
လူစုမခွဲရင် အဲဒီနေရာကနေ မထွက်ရင် တုန့်ပြန်ဖို့ ကားတွေက အာဏာပိုင်တွေဘက်မှာ အဆင်သင့်။
ဒေါ်စုနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း သွားရောက်စုဝေးပြီး ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်။
ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ သွားရောက် ဆုတောင်းသူတွေ ပိုများလာတယ်။
ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဦးစီးတဲ့ အဖြူရောင်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ၀င်ရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်။
အဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ်ရုံးမှာ ရံဖန်ရံခါ တွေ့ရတတ်တဲ့ ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ။
ဒေါ်စုနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေက အဆက်မပြတ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ရန်ကုန်မြို့ပေါ် အထူးသဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ကိုယ့်ဆန္ဒကို ပြခဲ့ကြတယ်။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာမှာ သံဃာတော်များဦးစီးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်လာတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေက ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ၀င်ရောက် ပူးပေါင်းခဲ့တယ်။
စစ်အစိုးရရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြသနေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ။
Posted by :) at 05:38 1 comment:
Posted by :) at 05:36 No comments: